05 / 11 / 2021 05 / 11 / 2021 ယောနသန်သည်ကနေဒီ 361 Views စာ2မှတ်ချက် ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft, 10292 အဆိုပါ Friends Apartments, 21302 Big Bang သီအိုရီ, 21316 အဆိုပါ Flintstones, 21319 ဗဟို Perk, ၂၁၃၂၈ Seinfeld, Friends, Lego, Lego Ideas, LEGO Seinfeld, Seinfeld
Brooklyn Nine-Nine နှင့် ရိုက်သည်။ Lego Ideas ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဆင့်၊ မေးခွန်းတစ်ခုက သူ့ကိုယ်သူ မေးသည်- ကွန်ပြူတာအသစ်တစ်ခုက အလယ်လူကို ဖြတ်ပစ်နိုင်သလား။
Brooklyn Nine-Nine ဖြစ်ပါ သည်။ LEGO တွင်ပေါ်လာမည့်နောက်ဆုံးပေါ် sitcom Ideas. စိတ်ကူးယဉ် 99th ပရိဝုဏ်ရှိ နယူးယောက်မှ စုံထောက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏နောက်တွင် ၎င်းသည် ရာသီများစွာနှင့် ကျယ်ပြန့်သော ပရိသတ်လက်ခံမှုကို ရရှိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက ၎င်းသည် ထောက်ခံသူ ၁၀,၀၀၀ ကို ထိခဲ့သည်။ Lego Ideas site တစ်ခုအတွက် အာမခံချက်ပေးမယ့်နေရာပါ။ Lego Ideas ပြန်လည်သုံးသပ်အဆင့်။
Sitcom များသည် အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ Lego Ideas ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း။ Theme ၏ အစောပိုင်းထွက်ရှိမှုသည် 21302 The Big Bang Theory ဖြစ်ပြီး The Flintstones မှ မှုတ်သွင်းထားသော အစုံ၊ Friends နှင့် Seinfeld သည် နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ တစ် Lego The Office (စတိဗ် ကာရဲလ် ဗားရှင်း) မှ မှုတ်သွင်းထားသော အစုံအလင်ကို အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားပြီးနောက် အတည်ပြုခဲ့သည်။ Lego Ideas ပရိတ်သတ်တွေ။
အဆိုပါ Lego Group သည် ဤနယ်ပယ်တွင် အစပျိုးမှုအချို့ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ 10292 အဆိုပါ Friends Apartments ကမ္ဘာကိုချဲ့ထွင်သည်။ Friends ကြိုဆိုလမ်းညွှန်မှုများ။ ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft အနည်းငယ်ကွဲပြားသောအကြောင်းအရာအမျိုးအစားမှဆွဲယူသည်။ သို့သော်၊ ပုံစံအချက်သည် ၎င်း၏ sitcom အစုံအလင်နှင့် အလွန်ဆင်တူပြီး ပိုမိုရင့်ကျက်သော အကြောင်းအရာကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုအား အကြံပြုသည်။
ထိုရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ကွန်ပြူတာအခင်းအကျင်းသည် ဤအတွဲများအတွက် ပိုအဆင်ပြေနိုင်မလား။ ၎င်းသည် အားကိုးခြင်းထက် ကွန်ပြူတာထုတ်ကုန်များ၏ တည်ငြိမ်သောစီးကြောင်းကို အာမခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Ideas ပရိသတ်တွေက သူတို့ကို ဒီဇိုင်းဆွဲတယ်။ ထို့အပြင်၊ ထိုသို့သော လှုပ်ရှားမှုအတွက် အလားအလာအချို့လည်း ရှိသေးသည်။ ကျွန်တော်တို မကြာသေးမီက LEGO Gaming အပြင်အဆင်အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။အကြိုက်များဖြင့် မှုတ်သွင်းထားသော အစုံများ ပါဝင်သည်။ Minecraft နှင့် Overwatch.
ကျယ်ပြန့်သော ထုတ်ကုန်ဆင်တူယိုးမှားများနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများရှိကြောင်း ဝန်ခံပါသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းများစွာတွင် ap တစ်မျိုးမျိုးပါရှိသည်။artment or office setting, after all. ဒါပေမယ့် အပြင်အဆင်ရှိရင် ကြိုက်တယ်။ Disney ဘယ်အရာမဆို သက်သေပြခဲ့ပြီးပြီ၊ ဒါဟာ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းမှာ အတော်အတန်ထပ်နေတဲ့အချက်ကို ဖောက်ဖျက်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
တရားဝင်ကြေငြာချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်တွင်၊ သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဘယ် LEGO လဲ။ Ideas ပရောဂျက်များသည် လက်ရှိတွင် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။. ၂၁၃၃၀ တစ်ယောက်တည်းအိမ် ခရစ္စမတ် 2021 ခုနှစ်အတွက် အချိန်မီ ထွက်လာသည် - အနည်းဆုံး ဤအရာ Ideas မော်ဒယ်သည် ခိုင်မာသောခြေရာပေါ်တွင် ရှိသည်။
← LEGO တိုင်းသည် 2021 - နိုဝင်ဘာလ အပ်ဒိတ်တွင် အနားယူပါမည်။
LEGO Luigi ၏စံအိမ်သည် တကယ့်အရာနှင့် မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။ →
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုသီးသန့် LEGO sitcom အပြင်အဆင်အတွက် အချိန်ရှိပါသလား။"
Lampoon ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက် !!!!!!! အံမခန်းဖြစ်မှာပါ..
Young Sheldon အစုံအတွက် ငါသတ်ပစ်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Bing Bong Theorem က ပိုကောင်းပါတယ်။ Sheldo က ပိုအောင်မြင်ရမယ်။